Yega IP kero 192.168.8.2 inopihwa kumuchina mukati mekabatana network uye haikurumidze kuwanikwa kuvhima pamambure. Kugonesa kupihwa kweIP kero mukati memasangano & netiweki, akachengetedzwa kero akagadzwa. Hazvina basa kuona wega IP kero nekutsanangura chaicho mufananidzo.
IP 192.168.8.2 ndeye yakatarwa IP inochengetedzwa ichishandisa admin koni yeirairi. Izvi zvinowedzerazve mamwe maIP akafanana ne192.168.123.1, 192.168.77.1, 192.168.8.1, nezvimwe zvakazara zvinozivikanwa kune yepasirese standard ye router IPs. Zvakare inonzi "IP Default Gateway".
Iyo IP kero https://192.168.8.2 yakanyorwa neInternet Yakapihwa Manhamba Chiremera IANA sechikamu che 192.168.8.0 / 24 akachengetedzwa manetwork. Mune yega gap IP kero haina kupihwa kune chero rakasarudzika boka uye munhu wese anogona kushandisa iyo IP kero pasina chibvumirano cheInternet yemunharaunda rejista sezvakatsanangurwa muna 1918 RFC, yakasarudzika munharaunda IP kero.
Kuwana iyo Admin Peji 192.168.8.2
Ingo pinda 192.168.8.2 mubhokisi rekero yewebhu browser. Iwe unogona kushandisa iro admin peji & iwe unotogonesa kupinda Passkey. Nekurova iyo 192.168.8.2 chinongedzo iwe unogona zvakare kutora logon kwairi.
Zvakare iwe unozowana ese ekutsvaga mhedzisiro yepachivande IP kero 192.168.8.2. Kana iwe uri kutsvaga kuti uburitse iyo login yeasina waya ma routers, ekupinda plug, kana modem iwe unogona kuishandisa nekungobaya pane iyi link. Nezve TP Link, D-Link, kana Netgear isina waya rauta mazita anonyanya kushandiswa mazita kana mapassword ndi 'setup' kana 'admin', unogona zvakare kudzosera default kusetera kumberi kumashure kwemuchina. Kana izvi zvikasashanda, saka unogona kusarudza zvakanaka kumisazve ma routers. Kuti uite izvi iwe unofanirwa kutsikirira & kubatisisa reset knob kwemasekondi angangoita makumi maviri. Mushure mezve kumisazve kumafekitori masetingi & anotendera iwe kuti upinde nemadhisheni anoonekwa pane chinamira.
IP kero 192.168.8.2 yakanyorwa pamwe neInternet Yakapihwa Nhamba Chiremera IANA senge chikamu cheyakavanzika network 192.168.8.0. Munzvimbo yakavanzika IP kero haina kupihwa kune imwechete yakatemerwa nzanga, kuwedzera kune ISP, uye munhu wese anogona kushandisa iyi kero yeIP pasina kubvumirana kwedunhu reInternet registry.
Zvisineyi, IP mapakeji akabatwa kubva kune yakasarudzika renji haigone kutapuriranwa kuburikidza neruzhinji Internet, & nekudaro kana yakadaro yega yega network ichida kubatana neInternet, inoda kuti iwanikwe kuburikidza ne network kero inoshandura (inonziwo NAT) gedhi, kana proxy server.
Iyo NAT yekuenzanisira gedhi inogona kunge iri isina waya kana yakabatana router iwe yaunowana kubva kune Broadband mutengesi. Iyo yakagadziriswa IP kero yeichi chishandiso mumambure renji kubva 192.168.8.0/24 inogona kunyanya kuva 192.168.8.254 kana 192.168.8.1 inovimba nesosi. Agedhi rewebhu interface rinofanirwa kuwanikwa kuburikidza neiyo Hypertext Transfer Protocols HTTP kumwe Hypertext Transfer Protocol Yakachengeteka HTTPS protocol. Kuti uedze izvi iwe unoda kupinda mubhokisi rekero 'http: // ip kero' kana 'https: // ip kero' yewewe wakasarudza webhu bhurawuza zvakafanana neGoogle Chrome kana Mozilla Firefox yekupinda ine zita rekushandisa & PWs yakatsanangurwa nemupi wako .